Yintoni i-upcycling kwaye iyinceda njani indalo | IBezzia
Susana Garcia | 17/04/2021 10:00 | yokuPhila
Senza inkunkuma eninzi ngakumbi nangakumbi kwaye ke kunzima kakhulu ukuba imeko-bume ingachaphazeleki. Siye saqonda ukuba ukusetyenziswa kakhulu kwezinto kubangela ukuba sivelise iitoni zenkunkuma minyaka le. Yiyo loo nto ukuphinda kusetyenziswe kwakhona eyona nto iphambili ukunciphisa ukwanda kwenkunkuma. Inkqubo ye- Ukuhamba ngebhayisekile ngumkhwa ofanelekileyo ojolise ekuvuseleleni kwakhona kunye nokuphucula oko sele unayo.
El I-upcycling yaziwa ngokuba yi-upcycling. Eli gama lisixelela ukuba ukuphinda kusetyenziswe kwakhona ngokuyilayo kuyila into ebalulekileyo, enexabiso elingaphezulu lee kwinto ebesinayo ngaphambili, kungoko songeza ixesha. Ngaphandle kwamathandabuzo, licebo elihle ukuvelisa ixabiso ngakumbi ngombono wokurisayikilisha kwaye uninzi luyabona ukuba luyinto enenzuzo.
1 Ivelaphi i-upcycling?
2 Ukunyuka kwebhayisekile kwifashoni
3 Ukuhamba ngebhayisikile kubugcisa okanye ukuhombisa
I-Upcycling ligama elingelilo elitsha, kuba lavela kwiminyaka yee-XNUMX. Kodwa bekungayi kubakho kwinkulungwane entsha xa eli gama liza kubaluleka. Kwiminyaka yoo-XNUMX ifuthe lokusingqongileyo belingakhange libonakale libaluleke kangako kodwa ngoku siziqonda ngakumbi iingxaki ezibangelwa kukusebenzisa abathengi kunye nomgangatho wokuphila esiwukhokelayo kwindalo kwixesha elifutshane nelide. Kungenxa yoko le nto kukho izimvo ezininzi ezongezwa kwiindlela ezintsha zobomi ezinje ngebhayisekile, emalunga nokusebenzisa ifayile ye izixhobo esele sinazo ukudala into entsha nexabisekileyo, into enobuchule enokusetyenziswa kwakhona. Lixesha elibaluleke kakhulu kwihlabathi lefashoni nakwezobugcisa.
Ukunyuka kwebhayisekile kwifashoni
Zininzi iifemu esele zijoyine le mbono intsha ngokusisigxina. Kulula ukubona iilebheli kwiifemu ezininzi ezisixelela ukuba iimpahla zazo zenziwe ngamanye amalaphu asetyenzisiweyo okanye nakwenye into enje ngeglasi okanye izinto zeplastiki. Oku kusenza sibone ukuba asithengi kuphela ifashoni, kodwa sikwathenga nengubo evela kwizinto esele zisetyenzisiwe ukwenza into entsha enexabiso elikhulu, ukuyenza iluncedo kwakhona. Umbono kwifashoni ungene kwaye Kukho iifemu zorhwebo ezifana ne-H & M okanye iZara ezibandakanya olu hlobo lwempahla. Jonga izalathiso kwaye uyakubona ukuba uninzi lwenziwe ngezinto ezisetyenzisiweyo, ke uya kwazi ukuba uyayinyamekela imeko-bume kwangaxeshanye uyonwabela ifashoni entsha.
Ukuhamba ngebhayisikile kubugcisa okanye ukuhombisa
Enye indawo esinokufumana kuyo eli xesha yile yobugcisa. Ubugcisa behlabathi busebenzise umthambo wokwenza izinto entsha ngezinto esele zikho ixesha elide. Namhlanje kukho igama lokukhankanya oku kwaye ngakumbi nangakumbi amagcisa athatha isigqibo sokunika ubomi obutsha iziqwenga kunye nezixhobo ezilahlwa ngomnye umntu. Enye indlela yokusebenzisa ezi zixhobo ngenjongo elungileyo, ukubathintela ekungcoliseni ngakumbi.
Ngokumalunga nomhombiso, unokufumana ezinye izimvo zekota. Kukho izibane ezenziwe ngekristali okanye Isinyithi esenziwe ngokutsha kunye namalaphuNjengoko kubonwe kwifashoni, amalaphu anokuphinda asebenze kwakhona ukusuka kwamanye amalaphu amadala alahliweyo. Ngale ndlela siya kuba nekhaya apho ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kuya kubakho ngeendlela ezininzi. Nokuba sonwabele ubugcisa okanye umhombiso kunye nefashoni sinokuthi sincede okusingqongileyo ngaxeshanye kwaye olu hlobo lokuqonda yinto efunekayo namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Yintoni i-upcycling
Izinto zokwenza emva koqeqesho
Zonke izitshixo zokupeyinta itshokhwe